Naannoo Gambeellaatti Investaroonni lafa heektaara kuma heddu ‘dogoggoraan’ fudhatan jedhaman akka deebisan gaafataman - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Diinagdee Naannoo Gambeellaatti Investaroonni lafa heektaara kuma heddu ‘dogoggoraan’ fudhatan jedhaman akka deebisan...
Naannoo Gambeellaatti Investaroonni lafa heektaara kuma heddu ‘dogoggoraan’ fudhatan jedhaman akka deebisan gaafataman
Bara 2009 eegalee naannoo Gambeellaatti lafa heektaara miliyoona 2'tu ummata irraa fudhatamee abbootii qabeenyaaf kenname.
Bulchiinsa naannoo Gambeellaatti investaroonni 100 lafa heektaara kuma heddutti laakkawamu maqaa investimentiin fudhatan akka deebisan gaafataman. Murtee kana irra gayuu isatiif sababni mootummaan naannichaa dhiyeessaa namoonni kunniin dogoggoraan lafa harka mootummaa federaalaa jiru bulchiinsa naannoo irraa fudhatan kan jedhuudha. Lafa investarootaaf qoodame kana irratti bulchiinsi naannoo angoo kan hin qabne ta’uu isaati bulchaan naannoo Gambeellaa Ob.Gatluak Tut Kon Fortune’itti kan hime. Naamoonni lafa akka deebisan gaafataman mataa-matatti lafa heektaara 500 hanga 2000 ta’u fudhatanii turan.
Lafti investaroonni fudhatan kuni, xiqqaattus, yeroofis ta’u harka saamtotaatii akka bayu kan murtaaye baatii Muddee keessa. Abbootii qabeenyaa biyya keessaa gurguddoo lafa heektaara 2000 fi achii ol fudhatan kan uggee itti dubbate hin jiru. Sochiin cimaan Oromoon waa’ee maaster pilaanii Finfinneen wolqabatee kaase mootummaan federaalaa lafa, hanga tokkos ta’u, akka deebi’uuf murteessuu isaatiif gumaacha godhuu hin oolle worri jedhan jiru.
Erga 2009 kaasee mootummaan Federaalaa wolakkaa lafa naannoo Gambeellaa kan ta’u lafa heektaara miliyoona 1.2 investaroota guruddoodhaaf qooduuf kan labse. Aanaa Diimaa jedhamu qofa keessatti lafa heektaara 100,000 kan investarootaaf laatamuuf murtaaye. Hanga 2015 lafti heektaara miliyoona 2 investaroota 5,583’n ummata Gambeellaa irraa saamamuu ragaaleen argisiisu.
Investaroonni lafa naannoo kanaa kan fudhatn koontiraata woggaa 50 mallateessaniiti. Itti fayyadamiinsa lafatiif woggatti qarshii 30 heektaara tokkoof kan kaffalan. Hedduun investarootaa guutummatti gibira kan hin kaffalee fi kanniin kaffalanis dirqama isaanii yeroodhaan kan hin bane ta’uu gabaasni baatii tokko dura waajjirri Ooditii Biyyattii addeesseera.
Abbootiin qabeenyaa kan gaafatamn lafa saaman ummataaf akka deebisan osoo hin taane, lafa feederaalaa mootummaan naannoo Gambeellaa investarootaaf qooduu isaati kan rakkoo ta’e. Lafti heektaara kuma heddu akkamitti dogogoraan akka qoodamu beekuun nam arkkisa. Akka imaammata lafaa biyyattiitti naannoon tokko lafa hanga heektaara 2000’tti liiziidhaan abbootii qabeenyaatiif keennuu ni dand’aa. Naannoon Gambeellaa mirguma sharafamtee qarree irra geette sanis gara guutummaatti dhabuutti deEmuu isaati kan haalli kuni mirkaneessu.
Akka heera biyyattiitti lafarrati ol’antummaa kan qabu naannoleedha. Yeroo yerotti kan ifatti mul’ataa dhufe garuu keessumattuu lafti diinagdeef bu’aa ol’aanaa qaban naannoo Gambeellaa, Oromiyaa, Kibbaa fi Affaar mootummaan federaalaatiin fudhatamaa dhufuu isaati. Lafti ummata Gambeellaa 50% mootummaa Federaalaan fudhatameera. Ummanni lafa isaa saamamuu fi naannooleen mirga heerri biyyattii isaaniif kenne sarbamuu isaaniitiif wanti Gambeellaa fi Oromiyatti ta’aa jiru ragaa fi agarsiisa guddadha.
Previous articleTaaksiin Finfinnee tankaarfii hujii dhaabuu cimaa fudhachuudhaan mootummatti bowwoo biraa fidan
Next articleBakar Shaalee mataa OPDO ta’uun kufaatii Woyyaanee saffisiisa